Harena voajanahary malagasy miha ringana « Mila mandray fepetra ny fitondrana ! »
Efa be dia be ny harena voajanahary Malagasy ringana, hoy ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny sampandraharahan’ny firenena mikambana misahana ny tontolo iainana eto amintsika na WWF, Tiana Ramahaleo.
Mbola mitohy mandrak’ankehitriny io ary haingam-pandeha. Mila mandray fepetra hentitra manoloana izany ny fitondram-panjakana, hoy hatrany ny fanazavany, ary tokony hisy fifanarahana iraisampirenena hotanterahantsika mihitsy mikasika ny fifandraisan’ny olombelona sy ny natiora. Handray ny fihaonambe iraisampirenena momba izany na ny ATBC moa i Madagasikara manomboka ny 31 jolay izao (TTF: Rahampitso), ka heveriko, hoy izy, fa fotoana fanararaotra io hetsika isan’ny goavana indrindra handraisantsika firenena miisa 50 eny Ivato io mba hitadiavana fifanarahana azo atao hanavotana ny voary eto Madagasikara.